High-Quality Safety type positive pressure IV catheter ifektri abakhiqizi | Sanxin
I-Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd ibhizinisi lebhizinisi likazwelonke lobuchwepheshe obuchwepheshe be-R & D yezokwelapha, ukukhiqiza, ukuthengisa nokusebenza. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yokuqongelela, inkampani inombono womhlaba jikelele, ilandela ngokucophelela amasu wokuthuthukiswa kukazwelonke, ilandela ngokucophelela izidingo zomtholampilo, incike ohlelweni lokuphathwa kwekhwalithi elizwakalayo kanye ne-R & D evuthiwe nezinzuzo zokukhiqiza, iSanxin ihole embonini ukuthi idlule uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-CE ne-CMD.
◆ Isixhumi sesixhumi esingena-sindiso sinomsebenzi wokugeleza okuya phambili esikhundleni sebhubhu yokufaka uphawu ingcindezi enhle, ukuvimbela ukubuyela emuva kwegazi ngempumelelo, ukunciphisa ukuvalwa kwe-catheter nokuvimbela izinkinga zokumnika njenge-phlebitis.
Device Idivayisi yokuvikela inaliti eyehlukile iqinisekisa ukuthi ishubhu yenaliti lihlehliselwa kusigqoko sokuzivikela ngemuva kokubhoboza kuphumelele, ukuvimbela ngempumelelo abasebenzi bezokwelapha ukuthi bangabhobozwa ngenaliti ngephutha futhi bagweme ukutheleleka.
Langaphambilini Ama-apparatus we-Cold cardioplegic solution perfusion wokusebenzisa okukodwa
Olandelayo: Isirinji eyinyumba yokusetshenziswa okukodwa